Nepal Auto | ट्राफिक जामबाट मुक्तिका लागि आयो अनौठो प्रविधि (भिडियो सहित)
ट्राफिक जामबाट मुक्तिका लागि आयो अनौठो प्रविधि (भिडियो सहित) 8 Ashwin, 2075
वैज्ञानिकहरुले ट्राफिक जाम जस्ता समस्यालाई निर्मुल पार्न मद्दत गर्नुको साथै इन्धन समेत कम खपत गर्न सहयोग गर्ने एड्भान्स ट्रान्सपोर्ट सिस्टमको विकास गरेका छन् ।
सो प्रविधिको नाम ’एड्भान्स गायरोस्कोपिक पब्लिक ट्रान्सपोर्ट’ राखिएको छ । सो प्रविधिको प्रयोगले सडक दुर्घटनामा कमी आउनुको साथै घण्टौसम्म ट्राफिकमा फस्नु पर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाइने छ ।
गायरोस्कोपिक पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम के हो ?
गायरोस्कोपिक पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम एक प्रकारको पोड हो जो ‘फ्लेक्जिबल लेग’ मा चल्ने गर्छ । यो आवश्यकता अनुसार खुल्ने वा एकै स्थानमा रहने गर्छ । साधारण भाषामा भन्ने हो भने यो ट्राफिक जाम भएको ठाउँमा गाडीको माथिबाट चल्ने बस हो । कहीं दुर्घटना भएको खण्डमा यो बस आफै रोकिने गर्छ । सो बस गायरोस्कोप (एक पोल) को भरमा टिकेको हुन्छ ।
गायरोस्कोपिक पोडको डिजाइन एक बस जस्तै हुन्छ । यसमा प्लेनमा जस्तै सिटिङ अरेन्जमेन्ट हुन्छ । यसमा सैलुन र लाउन्जको साथमा टीभी पनि जडान गरिएको हुन्छ । सो बसको यात्रा कुनै बसको यात्रा भन्दा सुरक्षित पनि हुने गर्छ । यस्तै प्रकारको प्रविधिको प्रयोग प्लेन र स्पेससिपमा हुने गर्छ । यसले अटोपाइलट मोडमा काम गर्छ ।
यसको आकार सानो ठूलो दुबै हुन सक्छ । सडकमा अन्य सवारी साधन भन्दा उचाईमा चल्छ । यदि यस प्रकारको टेक्नोलोजीको प्रयोग भएको खण्डमा यो सडकमा कुनै मेट्रो पिलर भन्दा पनि कम ठाउँमा चल्नेछ ।
कसले विकास गरे यो प्रविधि ?
इन्डिया टाइम्सको रिपोर्ट अनुसार यस प्रकारको प्रविधिको विकास दाहिर इन्सेट कम्पनीले गरेको हो । सो कम्पनीले नै गायरोस्कोपिक ट्रान्सपोर्टको अवधारणा ल्याएको हो ताकि भविष्यमा ट्राफिक जाम जस्ता समस्या नहोस् । कम्पनीको जानकारी अनुसार यो टेक्नोलोजी परीक्षण कालमै सफल भएको छ । यद्यपि हाल यसको डिजिटल प्रोटोटाइफ मात्र अटोक्याडमा उपलब्ध छ ।
कतारमा गायरोस्कोपिक ट्रान्सपोर्टको योजना
समाचार अनुसार कतारमा २०२२ मा हुने वर्ल्ड कपलाई मध्यनजर गर्दै २० वटा गायरोट्रेन स्थापित गर्ने योजना बनाइएको छ । दाहिर इन्सेट कम्पनीले रुसमा पनि यो प्रविधि प्रयोग गर्न इच्छुक भएको जानकारी दिएको छ । रुसमा केही रुटमा मात्र यस्तो अत्याधुनिक ट्रान्सपोर्ट देख्न सकिन्छ । जस्तै मस्कोको डायनामो मेट्रो स्टेशनदेखि शेरेमेतेवयो एयरपोर्ट रुटमा यो टेक्नोलोजी चल्ने सम्भावना रहेको छ ।
स्मार्टकार्ड वितरण पुस २ गतेदेखि
मंसिर २७, काठमाडौं – यातायात व्यवस्था विभागले लागू गरेको स्मार्टकार्ड चालक अनुमत...
५४ हजार स्मार्ट लाइसेन्स आइपुग्यो
काठमाडौं – यातायात ब्यवस्था विभागमा ५४ हजार नयाँ स्मार्ट लाइसेन्स अइपुगको...